सरकारले भनोस्, जनतालाई भ्याक्सिन लगाएर देखाउँछौं : अध्यक्ष साउँद - Morning Bell
कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार– ९औंं अंक
रक्षा बागचन	धनगढी	जेठ १८, २०७८
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट यति बेला विश्व आक्रान्त छ । चीनको बुहानबाट २०१९ को डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोनाले विश्वका मानव जातीलाई नराम्रोसंग प्रभाव पारेको छ । विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेका देशहरु समेतलाई कोरोनाले पछारेको छ भने हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक रुपमा विकट देशलाई कोरोनाको प्रभाव कस्तो होला सोझै आंकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो देशका तीनवटै तहका सरकारले कोरोनालाई परास्त गर्नका लागि प्रयासहरु गरिरहेका छन् । जसमध्ये जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको स्थानीय सरकार यो महामारीमा अग्र भागमा छ । महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार के गर्दै छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि कस्तो रणनीति अबलम्बन गरेको छ ? जनतालाई यो महामारीबाट बचाउन के गरिरहेको छ जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले ‘कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार’ नामक स्तम्भ सुरु गरेका थियौं । यसको ९औंं अंकमा हामीले अछाम जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झंकर साउँदसंगको कुराकानीलाई समेटेका छौं । प्रस्तुत छ अध्यक्ष साउँदसंग मर्निङ बेलका रक्षा बागचनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अध्यक्ष ज्यू, रामारोशन गाउँपालिकाको छोटो परिचय दिनुसन । कसरी चिनाउन हुन्छ आफ्नो पालिकालाई ?
रामारोशन सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रकारुपमा परिचति छ । साविकका सात गाविस मतालिकोट, चाफामाण्डौं, शान्तडा, बाटुलासैन, रामारोशन, भाटाकाटिया र सुतार मिलेर रामारोशन गाउँपालिका बनेको हो । यसको कुल क्षेत्रफल १७३.३३ वर्ग कि.मी. छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २९६२३ रहेको छ ।
“भेला, मेलालगायत सम्पूर्ण कार्यक्रममा रोक लगाएका छौं । एउटा वडाबाट अर्को वडामा नजाने व्यवस्था गरेका छौं । मलामी जान पर्यो भने पनि भौतिक दुरिको सुनिश्चितता गरेका छौं“
पालिकामा स्वास्थ्य संस्थाहरुको उपलब्धता कस्तो छ ?
हाम्रो पालिकामा सात वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन् । केही प्राइभेट क्लिनिकहरु पनि छन् । २० शैयाको कोभिड बिशेष अस्पताल बनाएका छौं । १० वटा अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गरेका छौं । १०, १५ वटा अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौं । हाम्रो पालिकामा बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकीहरु पनि छन् ।
पालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि के काम गरिरहेको छ ?
गाउँपालिकामा १० बेडको कोभिड आइसोलेसन हस्पिटल बनाएका छौं । उच्चतम सर्तकता अपनाएका छौं । कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि कार्यालय सिल गरेका छौं । बजार पूर्णरुपमा बन्द छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि भारतबाट आउनेलाई होम आइसोलेसनमा राखेका छौं । उनीहरुलाई १०, १५ दिन नपुगेसम्म्म समुदायमा घुलमिल हुन दिएका छैनौं । भेला, मेलालगायत सम्पूर्ण कार्यक्रममा रोक लगाएका छौं । एउटा वडाबाट अर्को वडामा नजाने व्यवस्था गरेका छौं । मलामी जान पर्यो भने पनि भौतिक दुरिको सुनिश्चितता गरेका छौं ।
“बिना परीक्षण मानिसहरुलाई गाउँ-गाउँ जान दिनुको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं । नत स्थानीय सरकारका लागि थप कुनै व्यवस्था गरिएको छ ।”
होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ ?
होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुको फोन नम्बर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीले उहाँहरुलाई फोन गरेर आवश्यक परामर्श दिइरहनु भएको छ । औषधि इत्यादि उपलब्ध गराउनु हुन्छ । हाम्रो पालिकामा १४ जना संक्रमित थिए । अहिले सबै स्वस्थ भैसकेका छन् । नयां संक्रमित देखिएका छैनन् । जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवीलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसहितको युनिफाइड टिम बनाएका छौं ।
“भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट पालिकामा आउनेहरुबाट जोखिम बढेको गुनासो आउँछ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?”
प्रदेश र केन्द्र सरकारले सिमामा उचित परीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने म देख्दछु । बिना परीक्षण मानिसहरुलाई गाउँ-गाउँ जान दिनुको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं । नत स्थानीय सरकारका लागि थप कुनै व्यवस्था गरिएको छ ।
पालिकाले गम्भीर खालका बिरामीलाई थप उपचारका लागि के व्यवस्था गरेको छ ?
कोभिडका केही गम्भीर विरामीहरु जो आर्थिकरुपमा पनि सम्पन्न छन् हेलिकप्टर मार्फत पनि राजधानी लगायत अन्य ठाउ जान सक्छन् । धेरैको त्यो आर्थिक अवस्था हुँदैन । हामीले भने जिल्ला अस्पताल मंगलसेनमा सबैको उपचारको व्यवस्था गरेका छौं । त्यहाँ नभए धनगढी र धनगढी नभए काठमाण्डौं जान पर्ने भए एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं ।
कोरोना नियन्त्रणमा अहिले केवल भ्याक्सिन प्रभावकारी देखिएको छ । पालिकामा कति जनताले भ्याक्सिन लगाएका छन् ?
भ्याक्सिन प्रभाबकारी देखिएको छ तर नेपाल सरकारको खरिद प्रक्रियामा हामी सन्तुष्ट छैनौं । संघीय सरकारले भ्याक्सिन खरिदका लागि पारदर्शी तरिकाले पहल गर्न पर्यो । हाम्रो पालिकामा के भ्याक्सिन लगाए भन्ने, केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीेले लगाए । जनताले भ्याक्सिन लगाए पो भ्याक्सिन लगाए भन्न मिल्छ । ३० हजार जनतामा सरदर ४÷५ सयले भ्याक्सिन लगाएका छन् ।
पालिकाबासी सम्पूर्णले कहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाउन पाउछन् ?
पुरै पालिकाका जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने जिम्मा संघीय सरकारको हो । पलिकाको विकास बजेट ८ करोड जति छ । सरकारले पत्र लेखेर भनोस यो बजेट पनि हामी जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन तयार छौं । हामीसंग भ्याक्सिन खरिद गर्ने कानुनी र आर्थिक हैषियत भएको भए हामी सबै जनतालाई भ्याक्सिन लगाएर देखाई दिन्थेयौं ।
कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । यो समय यहाहरुको चुनौती के छ ?
हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको विश्व व्यापी चुनौतीकोरुपमा रहेको कोरोना नै हो । वर्षातको मौषम आइरहेको छ बाढी पहिरो अर्को चुनौती हो । बाढी पहिरो गए कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो तिर पनि ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । खाद्यान्नको समस्या छ । केही जोहो त गरेका छौं । अहिले हजार क्विन्टल चामल व्यवस्थापन गरेका छौं ।
“हाम्रो टोली गाउँ, गाउँ पुगेको छ । महिला स्वयमसेवीका परिचालान गरिएको छ । उहाँहरुले टोल टोलको रिर्पोट दिनुहुन्छ । त्यही रिर्पोटमा आधारित भएर हामी काम गर्छौ ।”
कोरोना नियन्त्रण गर्न भनेर जारी भएको लकडाउनको लामो समय भइसक्यो । यसले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको हुन सक्छ । उनिहरुका लागि राहत दिनेबारे के सोच्नु भएको छ ?
कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई छुट्टै व्यवस्था त गरेका छैनौं । उपचारका लागि व्यवस्था गरेका छौं । तर कसैलाई खाद्यान्न आवश्यकता परे पालिकाको कार्यविधि अनुरुप सहयोग गछौं ।
महामारीमा सही सूचना प्रवाहले ठूलो महत्व बोकेको हुन्छ । गलत सूचनाले जनतालाई भ्रमित बनाउँछ । सही सूचना प्रवाहका लागि पालिकाले कस्तो कदम चालेको छ ?
गाउँपालिकामा गलत सूचना नफैलियोस भन्नका लागि मैले आफ्नै आवाजमा सूचना संदेश जारी गरेको छु । कोभिड सम्बन्धित विभिन्न सूचना पनि प्रसारण गरेका छौं । कोभिड सम्बन्धि विभिन्न भ्रमलाई निस्तेज गर्न कुनै पनि रुढीवादी र अवैज्ञानिक उपाय नअपनाउन निरन्तर सूचना जारी गरेका छौं ।
अहिले कस्ता बिरामीलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु भएको छ ?
हामीले सामान्य रुघा खोकीलाई टेस्ट गरेका छैनौं । तर यस्तै लक्षण तीन/चार दिनदेखि परीक्षणको दायरामा ल्याएका छौं । हाम्रो टोली गाउँ, गाउँ पुगेको छ । महिला स्वयमसेवीका परिचालान गरिएको छ । उहाँहरुले टोल टोलको रिर्पोट दिनुहुन्छ । त्यही रिर्पोटमा आधारित भएर हामी काम गर्छौ ।
अन्तमा पालिका बासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दालाई सर्वप्रथम म स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु । नआत्तिनु होस्, सबै भ्रमबाट आफूलाई मुक्त गर्नू होस् । उच्च मनोबलका साथ हामीले कोभिडसंग लड्नु पर्छ । यो विश्वकै चुनौती हो । हाम्रो सामूहिक प्रयासले हामी यो युद्द जित्ने छौं ।
१८ जेठ २०७८, मंगलवार २२:३१ बजे प्रकाशित
रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार सहमत
लुम्बिनीमा विपक्षीले मागे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा